Sidee si sax ah u dooran qalajiyaha buufiyo culus? - Shiinaha Changzhou Daming Pharmaceutical Qalabka
Sidee si sax ah u dooran qalajiyaha buufiyo culus?
Qof kasta oo loo isticmaalo qalab this waa in ay ogaadaan in qalajiyaha buufiyo culus ee ka ciyaari karaan door awood shaqada, heerka qalajiyo waa mid aad u dhakhso ah, iyo sidoo kale dammaanad qaadi karaa tayada alaabta, sida caadiga ah loo isticmaalo daaweynta kulaylka xasaasi qalajiyo daroogada. Intaa waxaa dheer, qalajiyaha buufiyo ayaa sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa si ay u diyaariyaan microcapsules, iyo gaari karo saamayn wanaagsan daaweynta. Sidaas sida aan dooran?
First of dhan, marka doorashooyin, zui waxaa had iyo jeer barbar noocyada kala duwan ee qalabka. Waxaa muhiim ah in aad maskaxda ku hayso waa in aad doorato kuwa qalabka daboolaan baahidooda, kuwaas oo ka badan jilicsan ee qaab-dhismeedka iyo u baahan tahay meel bannaan oo ka yar function isku.
Dhibka labaad, halka aan adeeganaya qalajiya buufiyo, waa in zui waxaa fiican raadinaya qalabka badan yihiin iswada oo fudud si loo xakameeyo. Sidaas, waxa ay noqon doontaa sahlan oo fudud si ay uga shaqeeyaan, taas oo hoos u dhigi karaa tirada ee ka shaqeeya iyo badbaadin kharashka.
Saddexaad, waa in aan dooran qalabka qaab lagu kalsoonaan karo oo xasilloon, isticmaalka tamarta yar iyo hufnaan sare, si aanu si fiican naga caawin kartaa dhammeeyo shaqada.
Mar afraadka, users waa in marka hore la caddeeyo shuruudaha dhabta ah, iyo sidoo kale qalab gaar ah iyo guryaha wax, iyo in la xaqiijiyo in size ee biiyaha ah ee qalabka la soo xulay oo la kulmay shuruudaha. Taasi micnaheedu waa in, waa in aan dooran qalabka qalajiyaha buufiyo oo kaa caawin kara si fiican noogu dhammeeyo shaqada.
Si kastaba ha ahaatee, xataa haddii qalabka ku habboon la doorto, waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah dhibaatooyinka codsiga dhabta ah. Wakhtigan, waxaan u baahan nahay si ay u eegaan haddii goob ee qalajiyaha buufiyo uu leeyahay wax dhibaato ah, sida haddii xawaaraha quudinta, goob heerkulka waa macquul, iyo dabeecadaha wax laftiisa, iwm, ka dibna waxa ay dib-u-qabsato
waqti Post: Aug-08-2018